Apple Manakarama Doug Bowman, mpikaroka zava-misy virtoaly | Avy amin'ny mac aho
Ny Financial Times dia manambara ny fandraisana mpiasa vaovao Apple iray manam-pahaizana manokana amin'ny sehatra saika tsy voadinika ho an'ny orinasa, miresaka momba ny zava-misy virtoaly izahay, teknolojia iray izay efa an-taonany maro novolavolaina ary hatramin'izao dia mbola tsy nisy ny fiantraikany ilaina hidirana ho mpanjifa. elektronika ataon'ny mpampiasa fa miaraka ny fisehoan'ny Oculus Rift ary ny fanohanan'ny rindrambaiko an'ny mpamorona, izao angamba no fotoana hanombohana mieritreritra ny ho avy antonony miaraka amin'ny vokatra afaka mifaninana amin'ny zavatra avy amin'ny orinasa hafa.
Noho io antony io, i Doug Bowman, mpampianatra momba ny lozisialy momba ny lozisialy ao amin'ny Virginia Polytechnic Institute sy State University, dia nofidian'i Apple ho iray amin'ireo tompon'andraikitra. amin'ny fivoaran'ny teknolojia ao anatin'ny orinasa.
Manokana, Doug Bowman no lohan'ny sehatry ny Fifandraisana amin'ny solosaina ary nifantoka tamin'ny "drafitra fifandraisan'ny mpanjifa telo refy sy tombony amin'ny toe-javatra virtoaly." Bowman dia nahazo mari-pankasitrahana marobe tamin'ny alàlan'ny interface interface telo mandroso sy ireo zava-bita manokana hafa ao anatin'ny VR, ka lasa io consultant an'ny Disney Imagering.
Tsarovy fa tsy ela akory izay i Apple dia nahazo ilay orinasa Emotient izay niasa tamin'ny fanekena ny fihetsem-po mifototra amin'ny fisehoan'ny tarehy ao anatin'ny habaka iray, izay ahafahan'ny fampiharana ny zava-misy virtoaly hanana dikany betsaka. Eto isika dia efa manomboka mieritreritra ny fampiharana amin'ny ho avy ireo teknolojia ireo ao vokatra mety hanavao ao anatin'ny tsena tena mifaninana.
Ankoatr'ity orinasa ity koa nividy iray hafa antsoina hoe FaceShift teo aloha miaraka amina haitao mafimafy kokoa saingy nihatsara mifototra amin'ny fanehoan-kevitr'ireo animator, izay afindra amin'ny fotoana tena izy amin'ny avatar na toetra noforonina tamin'ny 3D. Zavatra toy ny fakana sary mihetsika fa nandroso kokoa.
Heveriko fa tsy ela aorian'izay dia hahita vitsivitsy isika fanambaràn'i Apple momba azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple dia manakarama an'i Doug Bowman, mpikaroka zava-misy virtoaly
Patanty vaovao ho an'i Apple, amin'ity Apple Watch ity